အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ အချစ်ကိုတွေ့ဖို့ ခက်ခဲလာသည့် အကြောင်းရင်း – Gentleman Magazine
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ရွယ်စဉ်က အချစ်ဆိုတာ အရမ်းကို ရိုးရှင်းပါတယ်။ အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ အချစ်က ရှုပ်ထွေးလာတယ်။ ပိုပြီး နားလည်ရခက် ရှုပ်ထွေးလာရုံတင်မဟုတ်ဘူး။ အထိအခိုက်လည်း မခံတော့ပါဘူး။ အလွယ်တကူနဲ့ မချစ်မိနိုင်တော့သလို အတိတ်က အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကို မေ့ဖျောက်လိုက်ဖို့က ပိုခက်လာတတ်ပါတယ်။
ဒါ ဘာကြောင့်လဲ ? အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အချစ်အကြောင်းကို ပိုသိပြီး အလွယ်တကူချစ်နိုင်ကြရမှာ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှန်တရားက သဘာဝတော့ မကျပါဘူး။ အရွယ်ရလာတာနဲ့အတူ အသိဉာဏ်တွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေ ပိုများလာတာကြောင့် အချစ်ကိုတွေ့ရှိဖို့ ပိုလွယ်လာသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်မလာပါဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြိုးသွယ်ဖို့ကို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ တစ်ပိုင်းတစ်စပါဝင်လာပါတယ်။ အချစ်က သူ့အလိုလို မှော်ဆန်နေတာမဟုတ်တော့ပဲ ကျွန်တော်တို့ကပဲ အချစ်ကို မှော်ဆန်အောင် လုပ်လာကြပါတယ်။
အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့ အချစ်ရဲ့မှော်ဆန်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးသွားသလို ဘ၀ရဲ့ဆန်းကြယ်မှုတွေလည်း မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း သိပ်တော်မဆန်းပါဘူး။ အတွေ့အကြုံတွေ ပိုများပြီး အသိတွေကြွယ်လာတာနဲ့အမျှ ဘ၀နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်မဆန်တော့ပဲ လက်တွေ့ကျကျရှုမြင်တတ်လာတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ။ အချစ်အကြောင်းကို ပိုပြီးနားလည်လာတာနဲ့အမျှ အချစ်ကိုတွေ့ဖို့ကလည်း ပိုခက်ခဲသွားတတ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အတွေးအခေါ်တွေ ရင့်ကျက်လာပြီး အမှီအခိုကင်းလာတာနဲ့အမျှ အချစ်ကိုတွေ့ဖို့ ခက်ခဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အမှီအခိုကင်းမှုက ချစ်သူချင်းဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပြည့်စုံကောင်းမွန်နေတဲ့ စုံတွဲတွေ ဘာကြောင့်လမ်းခွဲသွားတတ်ကြတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူတို့တွေက လွတ်လပ်မှု၊ အမှီအခိုကင်းမှုကို လိုချင်တတ်ကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က အချိန်တိုင်း၊ နေ့ရက်တိုင်းကို လူတစ်ယောက်တည်းနဲ့ မကုန်ဆုံးချင်တတ်ကြပါဘူး။ သူတို့တွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ချစ်ကြတယ်ဆိုရင်တောင်မှ သီးခြားကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေ လိုချင်တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်း နေချင်တတ်ကြပါတယ်။
လူနှစ်ယောက်က လက်တွဲဖြစ်ကြပြီဆိုတာနဲ့ အပြန်အလှန်ဂရုစိုက်ဖို့အတွက် ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှု တစ်ချို့တ၀က်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ကြရပါတယ်။ ဒီကိစ္စက တကယ်ကိုလှပတဲ့ စွန့်လွှတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လွတ်လပ်မှု၊ အမှီအခိုကင်းမှုကို ပိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မွန်းကျပ်စရာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက နှစ်ဦးသား ဆက်ဆံရေးမှာ တစ်ယောက်ယောက်က ခွင့်ပြုပေးနိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုချင်း မတူညီတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ အားလုံးရှုပ်ကုန်တတ်ပြီး ချုပ်ချယ်တာတွေ၊ ကန့်သတ်တာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင် တစ်ယောက်အတွက် နာကျဉ်ရပြီး နောက်တစ်ယောက်အတွက် မွန်းကျပ်စရာတွေ ဖြစ်လာတာ ထုံးစံပါပဲ။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ အချစ်တွေလည်း အားလုံးလွင့်ပျံပျောက်ဆုံး သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရှယျရောကျလာတာနဲ့အမြှ အခဈြကိုတှဖေို့ ခကျခဲလာသညျ့ အကွောငျးရငျး
ကြှနျတျောတို့ ငယျရှယျစဉျက အခဈြဆိုတာ အရမျးကို ရိုးရှငျးပါတယျ။ အသကျအရှယျရလာတာနဲ့အမြှ အခဈြက ရှုပျထှေးလာတယျ။ ပိုပွီး နားလညျရခကျ ရှုပျထှေးလာရုံတငျမဟုတျဘူး။ အထိအခိုကျလညျး မခံတော့ပါဘူး။ အလှယျတကူနဲ့ မခဈြမိနိုငျတော့သလို အတိတျက အခဈြဇာတျလမျးတှကေို မဖြေ့ောကျလိုကျဖို့က ပိုခကျလာတတျပါတယျ။
ဒါ ဘာကွောငျ့လဲ ? အခြိနျကွာလာတာနဲ့ အခဈြအကွောငျးကို ပိုသိပွီး အလှယျတကူခဈြနိုငျကွရမှာ မဟုတျဘူးလား။ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျတဲ့ အမှနျတရားက သဘာဝတော့ မကပြါဘူး။ အရှယျရလာတာနဲ့အတူ အသိဉာဏျတှေ၊ အတှအေ့ကွုံတှေ ပိုမြားလာတာကွောငျ့ အခဈြကိုတှရှေိ့ဖို့ ပိုလှယျလာသငျ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဖွဈမလာပါဘူး။ တဈယောကျယောကျနဲ့ ခဈြကွိုးသှယျဖို့ကို ဆုံးဖွတျခကျြတှေ တဈပိုငျးတဈစပါဝငျလာပါတယျ။ အခဈြက သူ့အလိုလို မှျောဆနျနတောမဟုတျတော့ပဲ ကြှနျတျောတို့ကပဲ အခဈြကို မှျောဆနျအောငျ လုပျလာကွပါတယျ။
အသကျအရှယျရလာတာနဲ့ အခဈြရဲ့မှျောဆနျမှုတှေ ပြောကျဆုံးသှားသလို ဘဝရဲ့ဆနျးကွယျမှုတှလေညျး မှေးမှိနျပြောကျကှယျသှားတတျပါတယျ။ ဒါကလညျး သိပျတျောမဆနျးပါဘူး။ အတှအေ့ကွုံတှေ ပိုမြားပွီး အသိတှကွှေယျလာတာနဲ့အမြှ ဘဝနဲ့ပတျသကျပွီး စိတျကူးယဉျမဆနျတော့ပဲ လကျတှကေ့ကြရြှုမွငျတတျလာတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုပါပဲ။ အခဈြအကွောငျးကို ပိုပွီးနားလညျလာတာနဲ့အမြှ အခဈြကိုတှဖေို့ကလညျး ပိုခကျခဲသှားတတျပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ အတှေးအချေါတှေ ရငျ့ကကျြလာပွီး အမှီအခိုကငျးလာတာနဲ့အမြှ အခဈြကိုတှဖေို့ ခကျခဲလာတာဖွဈပါတယျ။ အမှီအခိုကငျးမှုက ခဈြသူခငျြးဆကျဆံရေးကို ထိခိုကျပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။ အားလုံးပွညျ့စုံကောငျးမှနျနတေဲ့ စုံတှဲတှေ ဘာကွောငျ့လမျးခှဲသှားတတျကွတာလဲဆိုတာ စဉျးစားကွညျ့ပါ။ သူတို့တှကေ လှတျလပျမှု၊ အမှီအခိုကငျးမှုကို လိုခငျြတတျကွလို့ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့က အခြိနျတိုငျး၊ နရေ့ကျတိုငျးကို လူတဈယောကျတညျးနဲ့ မကုနျဆုံးခငျြတတျကွပါဘူး။ သူတို့တှေ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အပွနျအလှနျခဈြကွတယျဆိုရငျတောငျမှ သီးခွားကိုယျပိုငျအခြိနျတှေ လိုခငျြတတျကွပါတယျ။ တဈယောကျတညျး နခေငျြတတျကွပါတယျ။
လူနှဈယောကျက လကျတှဲဖွဈကွပွီဆိုတာနဲ့ အပွနျအလှနျဂရုစိုကျဖို့အတှကျ ကိုယျပိုငျလှတျလပျမှု တဈခြို့တဝကျကို စှနျ့လှတျလိုကျကွရပါတယျ။ ဒီကိစ်စက တကယျကိုလှပတဲ့ စှနျ့လှတျမှုဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လှတျလပျမှု၊ အမှီအခိုကငျးမှုကို ပိုလိုခငျြတယျဆိုရငျတော့ မှနျးကပျြစရာတှဖွေဈလာတတျပါတယျ။ ပိုဆိုးတာက နှဈဦးသား ဆကျဆံရေးမှာ တဈယောကျယောကျက ခှငျ့ပွုပေးနိုငျတဲ့ကိုယျပိုငျလှတျလပျမှုခငျြး မတူညီတဲ့အခါမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအခါမှာ အားလုံးရှုပျကုနျတတျပွီး ခြုပျခယျြတာတှေ၊ ကနျ့သတျတာတှဖွေဈလာတတျပါတယျ။ ဒီလို အခွအေနမြေိုးမှာဆိုရငျ တဈယောကျအတှကျ နာကဉျြရပွီး နောကျတဈယောကျအတှကျ မှနျးကပျြစရာတှေ ဖွဈလာတာ ထုံးစံပါပဲ။ စိတျကူးယဉျဆနျတဲ့ အခဈြတှလေညျး အားလုံးလှငျ့ပြံပြောကျဆုံး သှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
Previous: သင့်ကောင်မလေးပျော်ဝင်သွားစေနိုင်မည့် ရိုဆန်သည့်အပြုအမူများ
Next: သူဌေးဖြစ်ဖို့ မလုပ်သင့်သည့်ကိစ္စ(၇)ခု